Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya oo madaxda Galmudug ka dalbatay in waqtigeeda lagu qabto doorashada Galmudug – Kalfadhi
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlay doorashooyinka Galmudug ee sanadkaan 2019, iyadoo baaq loo diray madaxda maamulka Galmudug iyo waxgaradka degaanka.
Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya ayaa dalbatay in waqtigeeda lagu qabto doorashada Baarlamaanka iyo midda Madaxweynaha oo ku beegan bisha soo socoto ee Luulyo sida lagu xusay War saxaafadeedka Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya.
Sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay in mudada xil heynta Dastuuriga ee Madaxda Maamulka Galmudug ay ku egtahay 4-ta Luulyo ee soo socoto, sidaas darteed ku baaqday shirweyne dib u heshiisiin oo lagu xalliyo arrimaha Galmudug, kaasoo ay isugu imaanayaan dhammaan waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka, laguna magacaabo Guddi farsamo oo qaban qaabiya shirweynahaas.
“Wasaaradda Arimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta iyadoo gudaneysa Waajibkeeda Qaran waxay madaxda Galmudug ugu baaqeysaa in waqtigii loo asteeyay lagu qabto doorashada Baarlamaanka iyo Madaxda kale ee Galmudug” ayuu lagu yiri War Saxaafadeedka ka soo baxay Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya.
“Wasaaradda Arimaha Gudaha iyadoo Garowsan muhiimadda ay leedahay wadatashiga iyo midnimada bulshada Galmudug waxay ku baaqeysa in shir dib u heshiisiin oo deg deg ah isugu yimaadaan dhamaan waxgaradka iyo hogaanka Galmudug, si loo xaliyo arimaha Galmudug loona sameeyo guddi farsamo oo daadihiya Shirka” ayaa sidoo kale lagu yiri Qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya
Golaha Shacabka oo lagu wado in ay maanta Ansixiyaan Sharci muhiim u ah Wasaaradda Maaliyadda